Ntanetị | Ozi bara uru maka onye ọ bụla.
Kedụ ihe m ga - eme ma ọ bụrụ na ozi “502 njehie” apụta?
Mgbe ị na-agagharị na saịtị ma ọ bụ ibe ọ bụla na Internetntanetị, mgbe ị na-abanye saịtị dị iche iche, ozi "njehie 502" nwere ike ịpụta na ihuenyo nke ileba anya gị. Ma ị naghị…
Usoro ekwentị dị na saịtị: esi eme? Aza aziza
Taa, ọtụtụ ndị mmadụ na-aga n'onlinentanetị site na ngwa eji agagharị - mbadamba, ekwentị, na nke a, njikarịcha saịtị na-aga ọkwa ọhụrụ. Ọ bụrụ na onye ọrụ ahụ abata wee hụ na saịtị ahụ ...
EoBot.com: otu esi arụ ọrụ na saịtị ahụ? Nyocha nyocha maka ịnweta EoBot.com na Ngwuputa
Ego a na-enweta na Intanet bụ isiokwu dị oke mma maka ọtụtụ ndị na-eme ọ dịkarịa ala otu mgbe ị na-achọ ohere irite n'ịntanetị. Otu ụzọ ị ga-esi nweta ụdị ego ahụ bụ site na ịbelata ego. Mba, okwu…
Ajụjụ dị mkpa: otu esi eme otu emechiri emechi "Na kọntaktị"?
Taa, ọtụtụ mmadụ, ọkachasị ndị na-eto eto, na-ahọrọ ezigbo nkwurịta okwu na mebere sava. N'ọtụtụ oge, akụkụ buru ibu nke ndị obodo na-eji ike nke netwọkụ mmekọrịta rụọ ọrụ. Ndị kachasị ewu ewu na ikpe a bụ VKontakte. ...
Tingtọlite ​​ozi Yandex na Outlook: nkọwa
Tingtọlite ​​ozi Yandex na Outlook enweghị ihe ọ bụla gbagwojuru anya, ma ọ bụrụ na ị maghị etu ịtọ ntọala ziri ezi, mgbe ahụ anyị na-akwado gị ka ịmara onwe gị n'isiokwu a. Ọ bụrụ na…
Etu ị ga-esi mepee peeji Odnoklassniki dị mfe ma dịkwa mfe
Ebe ndị a na-akparịta ụka n'Socialntanet na-ewu ewu taa. Ntanetị mmekọrịta, na mgbakwunye na ọrụ ntụrụndụ naanị, na-eburu ọtụtụ ohere izu. Ọ́ bụghị ihe ịtụnanya ile onye gị na ya…
Etu esi enye Taobao - ntuziaka zuru ezu. Storelọ ahịa Taobao nke China: nyocha na nnyefe
Aghọtara asụsụ China dị ka ihe kacha sie ike na mbara ala, mana ọ dị ka onye ọ bụla maara okwu ahụ "Taobao". Nke a bu nnukwu ahia ahia, ahia ahia nke otutu ulo ahia si di n’elu. Ndi nwere mmuta nwere ike igwa otu esi enye iwu…
Gịnị bụ okporo ụzọ Internetntanetị: di ​​na nwunye nke ọtụtụ okwu
Kedu ihe bụ okporo ụzọ na ntanetị, n'oge na-adịghị anya, onye ọrụ netwọkụ ọ bụla ga-ama. N'okwu niile, anyị ga-anwa ikwu banyere echiche a. Trafficntanetị na ọnụnọ ego bụ ozi, ma nke ọpụpụ, yabụ ...
Nweta na ntanetị na mgbasa ozi na-enweghị mgbakwunye: nkọwa, nyocha. Nweta na ịntanetị site na ịlele mgbasa ozi
Ikike inweta ezigbo ego na Internetntanetị na-amasị ọtụtụ ndị, karịsịa maka ndị nwere nsogbu ụfọdụ na ọrụ ọdịnala. Ihe ndị kpatara ya nwere ike ịdị oke ma ọ bụ nke na-adịghị anya, mana nke ahụ apụtaghị ...
Riley - gịnị ka ọ pụtara? Kedu ka esi ghọta ma jiri?
N'oge na-adịbeghị anya, slang ntanetị amalitela ụzọ ya n'ime nkwukọrịta ndị mmadụ na - ebi ndụ, ụfọdụ ndị na - etinyekarị ọnụ (ọkachasị ndị na - eto eto) nwere ike ịhọrọ ịghara ikwu "daalụ," ma ọ bụ ma ọ dịkarịa ala "daalụ," kama ịsị ...
Ihe ọ bụla dịka ọ bụ n'ezie: ticket.ru. Nyocha
Taa, enwere saịtị dị ukwuu n'ihi ekele ị nwere ike ịtụ ma ọ bụ nye tiketi maka ntinye ụlọ. Otu n'ime ndị ahụ bụ ebe nrụọrụ weebụ tiketi.ru, nyocha nke jupụtara otuto, ...
Choo saịtị site na Google na Yandex. Ederede Nchọgharị saịtị
Ka ị na-eji ozi ọhụrụ emelite akụ gị, ngwa ngwa ị ga-achọ ịbanye na nhazi ahaziri adaba. Enwere ọtụtụ nhọrọ maka otu esi eme nke a. Firstzọ nke mbụ na-atụ aro iji ngwa arụmọrụ nke CMS gị. Nke abuo…
Beats7.ru: nyocha ụlọ ahịa
Ejiri anyị ịzụta elektrọnikụ na ntanetị. Kwa afọ, ọnụ ọgụgụ mmadụ na-arịwanye elu na ịzụ ahịa n'ịntanetị, na-achọpụta na thentanetị ị nwere ike ịzụta otu ngwaahịa na mbelata ego. Ọzọkwa ebe a ...
Ajuju 17 na nchekwa data emepụtara na sekọnd 0,602.